के मिनियापोलिस सिक्ने पाठ हुनेछ? - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
अप्रिल 21, 2021 अप्रिल 20, 2021 रोनाल्ड ह्यारिस पार्कर ब्लग, विशेष समाचार
पुलिसले खराब भाडाहरू बनाउँछ।
खराब किराया लेखा दिनु पर्छ।
त्यो उत्तरदायित्वको परिणाम हुनुपर्दछ।
जबसम्म कुनै संगठनको अभ्यासहरूले नीतिहरू प्रतिबिम्बित गर्दछ, नीतिहरूको कुनै फाइदा हुँदैन। फरक तरिकाले भनियो, एक पुलिस विभागले अत्यधिक बललाई सम्बोधन गर्ने धेरै नीतिहरू राख्न सक्छ, तर यदि उल्ल no्घनले कुनै परिणाम प्राप्त गर्दैन भने, तब नीतिले कुनै प्रभाव पार्दैन। त्यसोभए नीति किन छ?
को मिडिया कभरेज जर्ज फ्लोयड पछिल्ला धेरै हप्ताहरूमा परीक्षण खपिएको छ; मिडियामा तपाईले पढ्ने, हेर्ने र सुन्ने सबै सामग्रीमा समर्पित छ। अधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो हो कि हामी यस बुँदामा कसरी पुग्यौं?
अधिकांश पुलिस विभागहरूले अत्यधिक बल सम्बोधन गर्दैनन्? सबै पुलिस अधिकारीहरूलाई थाहा छैन कि तपाईं केवल उचित बल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, अधिकार र परिस्थितिहरूमा उपयुक्त?
मलाई लाग्छ अधिकांश अधिकारीहरू यी सिद्धान्तहरू बुझ्दछन् र पालन गर्छन्। तिनीहरू उही व्यक्ति हुन् जसले तपाईंलाई भन्नेछन् कि उनीहरू डिपार्टमेन्टमा सामिल भए र सेवाको लागि र समुदायको सुरक्षा गर्न। प्रमुख कुनाको कार्यालय, ठुलो कार, ठूलो घर उनीहरूको लक्ष्य थिएन। तिनीहरू दिनहुँ घरहरू छोडछन् र साथीले उनीहरूलाई यसो भनिरहेको सुन्छन्, "तपाईको दिन राम्रो होस् र सुरक्षित रहनुहोस्।" तिनीहरू जान्दछन् कि उनीहरूले ब्याकअप बिना नै सेवाको लागि कलहरू लिइरहेका छन् वा व्यक्तिहरूसँग व्यवहार गर्दै जुन "आरामसँग सुन्न" छन् र उनीहरूको अख्तियारको ख्याल गर्दैनन्। तिनीहरू जान्दछन् कि तिनीहरूले भयंकर व्यक्तिगत अपराधहरू देख्न सक्छन् र मृत्युको जोखिममा छन्। उनीहरूलाई थाहा छ कि उनीहरूले अपराधी व्यवहारको तिनीहरूको व्याख्याको आधारमा आपराधिकताको तत्काल निर्णयहरू गर्नुपर्दछ। उनीहरूलाई थाहा छ कि असामान्य दिनचर्या हुनेछ र "सबै गिलहरीहरू जंगलमा हुँदैनन्।" सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, उनीहरूलाई थाँहा हुन्छ कि पुलिस अफिसरको लागि खराब दिन हुन सक्छ कि उनीहरू फेरि कहिल्यै घर नछाडे।
जर्ज फ्लोड ट्रायलको मिडिया कभरेजले विगत केही हप्ताहरू खपत गरेको छ। जबसम्म अभ्यासले नीतिहरू प्रतिबिम्बित गर्दछ, नीतिहरूको कुनै उपयोग हुँदैन।
अझै, तिनीहरूको काम सेवा, सुरक्षा, र नागरिकको सामान्य कल्याणको देखभाल गर्न बाँकी छ।
तर त्यहाँ अपवादहरु छन्। कहिलेकाँही पुलिस विभागहरु एक नराम्रो किराया बनाउँछ। प्रत्येक विभाग मा एक छ, अक्सर अधिक। तपाईं व्यक्तिलाई चिन्नुहुन्छ जसले मानिसमाथि शक्ति खान्छ, जो मान्छेहरूसँग छिटो हिर्काउँदा र चाँडो बाहिर निस्कन्छ। जो परिस्थितिको बावजूद जहिले पनि अत्यधिक आक्रामक र लडाकू हुन्छ। कसले पहिले समस्याहरू बढाउँछ, त्यसपछि समाधान खोज्छ। यी उदाहरणहरू किन पुलिस अधिकारीहरू आलोचना, क्रोध, र आक्रोशको लागि पूर्वनिर्धारित बटन हुन्।
मलाई के अप्ठ्यारो लाग्छ कि हामी यो बिन्दुमा कसरी पुग्यौं?
हामी यस बिन्दुमा पुगेका छौं किनकि खराब हालतमा उनीहरूको विरुद्धमा सर्वसाधारणले गुनासो गरेको एक इतिहास छ। तिनीहरू बाँच्दछन् किनकि उनीहरूको बिरूद्ध मुद्दा "कुनै अनुशासन" बिना नै बन्द गरिएको थियो, वा यदि कुनै आदेश थियो भने, यो लिखित फटकार थियो।
डेरेक चौविनको बिरूद्ध गवाही दिने प्रमुख मेदारिया अराराडोन्डोको प्रशंसा गरियो किनभने उनी र अन्य मिनियापोलिस पुलिसकर्मीहरूले "ब्लू वाल अफ साइलेन्स" तोडेका थिए। उनीहरूले साथी अधिकारीहरूको गल्ती, कुव्यवहार वा अपराधको बारेमा रिपोर्ट नगर्न प्रहरी अधिकारीहरूमा मौनताको अनौपचारिक संहिता उल्ल .्घन गरे। चीफ अराराडोन्डोलाई मेरो प्रश्न हो, विभागको नीतिहरू उनीहरूको अभ्यासमा झल्काउन सुनिश्चित गर्न के गरिएको छ? र यो कसरी अनुगमित गरिन्छ?
मानौं कि "पुलिस उजूरी प्रक्रिया" छलफलमा ल्याइएको छ। त्यो अवस्थामा, म सोध्छु कति गुनासोहरू दायर गरियो अनुशासनको परिणामस्वरूप?
नीतिलाई समान अभ्यासको लागि, यसले दिन प्रति दिन विचार, अनुगमन, र कार्यहरू लिन्छ। पुलिस नेतृत्वले महसुस गर्नै पर्छ कि न्यायको उचित प्रशासनको सम्बन्धमा के चाहिन्छ र केहि नराम्रो ज्यालामा वास्तवमै के भइरहेको छ त्यो दुई फरक चीज हो।
खराब हाइरहरूले मुद्दामा अपराधको गम्भीरतालाई बढावा दिनेछ। तिनीहरूले गलत अर्थ लगाउँदछन् कि संदिग्ध उनीहरू वा अरुका लागि तत्काल खतरा हो कि होइन। तिनीहरू प्रायः बढि विचार गरीरहेछन् कि एक व्यक्ति सक्रियतापूर्वक गिरफ्तारको प्रतिरोध गर्दै छ वा उडान द्वारा गिरफ्तारीबाट बच्न कोसिस गर्दैछ। संक्षेप मा, तिनीहरूको तर्क न त रैखिक हो न तर्कसंगत हो।
२०२१ मा प्रहरीको दुनिया यो हो कि पुलिसले १,००० कामहरू सही गर्न सक्दछ, र जब एक अफिसरले केही गल्ति गर्छ भने मिडियाले कानूनको कार्यान्वयनलाई यस प्रतिकूल घटनासँगै छोड्दछ। म विश्वास गर्न जारी राख्छु कि यो अपवाद हो र आदर्श होईन। म पुलिसमा विश्वास गर्न चाहन्छु र मलाई लाग्छ उनीहरूले मद्दतको लागि मेरो कललाई सहयोग गर्दछन्। मलाई लाग्छ कि राम्रो पुलिस अफिसरको लागि नराम्रो पुलिस अफिसर भन्दा खराब कुनै कुरा छैन। म केवल आशा गर्न सक्छु कि पुलिस प्रमुखहरूले यो सुन्नेछन् र अभ्यासहरू विकसित गर्नुहोस् जुन उनीहरूको विभागलाई उनीहरूको नराम्रो भाँडाबाट छुटकारा दिन्छ।
सांप्रदायिक समाचार अभ्यासहरू = नीतिहरू
रोनाल्ड ह्यारिस पार्कर
डा। रोनाल्ड ह्यारिस पार्कर एक औद्योगिक मनोवैज्ञानिक हो जसले एक राज्य ट्रूपरको रूपमा आफ्नो व्यावसायिक क्यारियर शुरू गरे।RonHParker@Msn.com